Hopitaly Befelatanana 200 isam-bolana ireo zaza tsy salama tsaboina ao
Homamiadana mpahazo ny ankizy Ny rà sy ny voa no tena mateti-pitranga
Maro karazany ireo homamiadana mahazo ny ankizy eto amintsika ankehitriny. Raha ny homamiadan’ny maso no tena nalaza teo aloha dia efa misy ihany koa amin’izao ny antsoina hoe : infum oxipital, ny tumeur faciale, ny homamiadan’ny vihy ho an’ireo zazalahy kely, ny homamiadan’ny aty…
Vaksiny fanefitry ny aretina kitrotro Hotanterahina ato ho ato ny andiany manaraka
Mbola betsaka ireo ankizy lasibatry ny aretina kitrotro amin’izao fotoana izao. Toraka izany koa ny olon-dehibe noho ny fihenan’ny hery fiarovana ao anatiny.
Vaksiny fanefitry ny kitrotro Mbola hitohy ny hetsika
Fahombiazana no azo tamin’ilay fanaovam-baksiny faobe fanefitry ny kitrotro notanterahina teto amin’ny Faritra Analamanga, hoy ny teo anivon’ny minisiteran’ny fahasalamam-bahoaka.
Mahatratra 200 isam-bolana amin’izao ireo zaza tsy salama tonga manatona ny hôpitaly etsy Befelatanana. Ankoatra ireo lasibatry ny aretin’ny homamiadana dia misy ihany koa ireo voan’ny tazo mahery, ireo teraka tsy tonga volana…
Ho an’ity farany manokana dia 20 ka hatramin’ny 25 isa isam-bolana eo ho eo no azon’ny fikambanana Compassion Madagascar tarihin’ny dokotera Elodie Ranjanoro raisina an-tanana eo anivon’ity hôpitalim-panjakana iray ity. Hiantohany iray manontolo ny fanafodin’ilay zaza sy ny sakafon’ny Reniny mandritra izany izay mahatratra hatrany amin’ny 15 tapitrisa Ar isam-bolana, raha araka ny fanazavana azo. Ho an-dRtoa Larissa, renim-pianakaviana iray monina etsy Namontana ohatra dia vao herinandro izao no nahatongavan’izy mianaka etsy amin’ny hôpitaly Befelatanana tohanan’ny fikambanana Compassion Madagascar. Fito volana ilay menaky ny ainy tsy salama nefa vao 1kg sy 500 monja no lanjany raha 1 kg sy 700 tamin’ny vao teraka. Noho ny havizanan’ity Renim-pianakaviana iray ity diso tafahoatra no nahatonga izany raha araka ny fanazavany. Mba ho fanampiana ireny karazan’olona ireny ary dia vonona ny orinasa Star hanome tanana ny fikambanana Compassion. Mandritra ny herin-taona no hisian’ny fanohanana, ahitana lela-vola 5 tapitrisa Ar isam-bolana, miampy rano voadio manokana “Eau Vive”. Tanjon’ny orinasa ny mba hahafahany manolo-tanana ny zaza tsy salama tahaka ireny ho fitsinjovana ny fiainan’ny fianakaviana Malagasy manana ny tsy salama. Tontosa omaly tetsy Befelatanana ny sonia fifanekem-piaraha-miasa mifandraika amin’izany. Tsiahivina moa fa raha vantany vao latsaky ny 2 kg sy sasany ny zaza vao teraka iray dia voasokajy ho ao anatin’ny tsy ampy lanja.